The kasị Instagrammable ebe na Europe:The Bernina Express: Switzerland - Italy
Na nke a karịsịa ụzọ, ị ga-ịrị 1,142m-elu Brocken, kasị elu ọnụ ọgụgụ kasị elu nke dị n'ebe ugwu Germany, ụtọ panoramic echiche nke na gburugburu ala. ma, ị na-adịghị ka naanị dị ka rịa ugwu ileta Harz Mountains. N'ezie, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-amasị ụmụaka ji egwuri egwu obodo na fairytale castles, UNESCO World Heritage Sites, wusiri ike nakwa ebe obibi si Middle afọ ma ọ bụ na-ahụ na anụ ọhịa na ha eke ebe obibi. Zuru okè n'ihi na gị Instagram oriri!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)